Janeraal Xuud oo Ciidamo soo bandhigay kadib farriintii uu u diray Madaxda Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Janeraal Xuud oo Ciidamo soo bandhigay kadib farriintii uu u diray Madaxda Hir-Shabeelle
Janeraal Abuukar Xuud oo siweyn uga soo horjeeda Maamulka Cusub ee Hir-Shabeelle ayaa Deegaanka Burqaniinyo ee duleedka Beledweyne waxaa uu kusoo bandhigay Ciidamo farabadan oo tababar kujira.
Ciidamadaas tababarka uu u socdo ayaa waxaa dhalinyaro Isxilqamay ay gaarsiiyeen ku dhowaad 100 Joog oo dariiska Calanka ah, iyada oo sawiro laga soo qaaday lagu baahiyay Baraha bulshada.
Ciidamada ayaa dhawaan isku diyaarinaayo in ay howlgalo kala duwan ay ka fuliyaan Magalada Baladweyne iyo deegaanada hoos yimaado dhawaan ayey eheed markii General Abuukar Xaaji Warsame Xuud uu Kirshabeelle u qabtay 48 Saac in ay uga baxaan Baladweyne.
Qeybta uu hada tababarka u socdo ayaa ah dufcadii 3aad taas oo ka dhigan in lababaray Ciidan gaara 1000 Askari waxana horay u diyaarsanaa una tababarnaa ku dhawaad 1000 kale oo heegan ku ah Taliska Golaha Kacdoonka, sida lagu sheegay war kasoo baxay Jabhadda Janeraal Xuud.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo soo saaray digniin la xiriirta heshiiskii lagu gaaray Baydhabo
Next articleSawirqaadaha Taliyaha Ciidanka Asluubta oo Muqdisho lagu dilay